Kusho ukuthini kuLeash? Kungani izinja ezinobungane zingaziphatha ngokhahlo lapho zisebenza. - The Kerry Blue Terrier Foundation
Shiya amazwana / OLD - Ukuzala Intro, Training / By Umhleli wewebhu we-KBTF / December 28, 2015 July 30, 2019
Ishicilelwe kabusha ngemvume, iBelvoir Media Group, LLC.
Ngokubhalisela nolunye ulwazi, shayela (800) 424-7887 noma
I-WDJ Inqubomgomo yobumfihlo
Uma uhlangana nabanye abanikazi bezinja, akungabazeki ukuthi uke wezwa amazwi afanayo engiye nawo, kaningi: “Inja yami ihamba nezinye izinja uma
off-leash; unolaka inja kuphela lapho i-leash yakhe ivulekile. ”Kungenzeka ukuthi nawe uke washo ngokwakho.
Isizathu sokuthi kuphawulwe okuzwakala njalo ukuthi kuwukuziphatha okujwayelekile: Izinja eziningi ezihamba kahle nezinye izinja uma zishiyelwa imishini yazo
banolaka uma bedonswa lapho behlangana nezinye izinja.
Siyazi ukuthi ulaka lubangelwa yingcindezi. (Bheka "Umkhawulo omusha," i-WDJ Okthoba 2010.) Ngokusobala, kukhona okuthile mayelana nokuxhamazela okuningi
izinja zithola ukucindezelwa ngokwanele ukuthi zenza kube nokuhlukumezeka. Kunezizathu eziningana zalokhu. Ake sibheke ngayinye yazo.
UKUQINISEKISA NGOKUXHUMANISANA NOKUVUNYELWA KOMNYANGO WEZOBUCHWEPHESHE
Cabanga emqondweni wakho izinja ezimbili zihlangana futhi zibingelela, zihamba. Babamba umdanso wokuxhumana nomphakathi - ukuthuthuka, ukubuyela emuva, ukuzulazula komunye nomunye, ukuhogela
izitho zomzimba ezahlukahlukene, okunikeza amasimi olimi lomzimba okuhloselwe ukugcina ukuhlangana kungumbango. Kwesinye isikhathi ukunyakaza kuhamba kancane; kwesinye isikhathi bayashesha.
Uma inja eyodwa iqaphe noma yesaba enye, ingabuya njengoba ifisa, isebenzise ibanga lomphakathi ukuze iziphephe.
Manje bonisa lezo zinja ezimbili zihlangana. Umdanso ufakwe insimbi, uvinjelwe ukukhawulwa kweleash. Inja eyodwa izama ukujikeleza enye,
nemikhono evuzayo izungeze imilenze yakhe. Inja eqaphile ingathanda ukubuyela ekuphepheni, kepha iyazi ukuthi i-leash iyawuvimba umnyakazo wayo, futhi ikhethe
enze inketho yakhe yesibili yokwandisa ibanga - ukhula kanye nesififi ukukhombisa enye inja ukuba isuke - ngubani ongakwazi, ngoba ukhokhelwe. The
Ngokuzayo, inja eqaphile izonikela ngesilokotho futhi ihlwithe ngaphambi kokuba isondele ngokwanele ukuze enye inja ixhumane. Ukuvikela okuhle yicala elihle.
Bethukile, abanikazi basuka komunye nomunye, futhi ulaka lwenja esesabayo luqiniswa ibanga elandayo. Ama-Behaviors aqinisiwe
phinda futhi wandise, futhi ulaka lwenja eqaphelayo luyanda njengoba ebona ukuthi kuyicebo lokuziphatha eliphumelelayo kuye - kugcina okunye ukwethusa
izinja kude. Manje unenja elwa nolaka. Ngaphandle kokuvuza, usekhetha ukusuka kwenye inja - ukukhetha kwakhe kokuqala.
Isimo esishubile, esimude, sangaphambili seLabrador - esidalwe ukudonswa kwakhe ngochungechunge lwe-choke lwe-cheoke - sibukeka sifana kakhulu nesithukuthezi esinolaka, futhi singenza enye inja isivikele.
INDAWO YOKUQOQESHA YOKUFUNDA
Le yinja ethanda ukuvakasha nezinye izinja, ku-off noma leash. Eqinisweni, uqinise isimilo sakhe esithi “ngifuna ukuya kwenye inja!”
kuvame ukumvumela ukuthi abingelele ezinye izinja-i-leash, aqaphele ukuthi leash ayikhululekile, njengoba umqeqeshi wakho ekubonisile ekilasini, ukuvikela ukuthi
ukugxambukela kwezinja nokuxhumana okujwayelekile kwezinja. Kodwa-ke, kwesinye isikhathi abanikazi bezinja ezisondelayo banikeza isibonakaliso esicacile sokuthi abafuni
vumela izinja zabo ukubingelela ezakho. Uhambisana nenhlonipho, uvimba inja yakho nge-leash yayo ukuze uyibambe.Iyinja yakho, ephethwe ukulawula okuphansi kokufaka
kanye nokubekezelela okuphansi ngokukhungatheka, kuba nomsindo omkhulu lapho isifiso sakhe sokubingelela ezinye izinja sithikamezwa. Ukudideka kwakhe nokumvusa kwakhe kuphenduka ulaka,
futhi inja yakho ibizwa ngokuthi "iyasebenza." Ngaphandle kokugcotshwa, wayezobingelela ngenja ezinye izinja ngaphandle kokukhungatheka noma ulaka.
Futhi, umuzwa onikezwa ezinye izinja (kanye nabaninizi abanenhliziyo yezinye izinja) ngesimo esenziwe ukudonswa kwenja okuxakayo ku-leash kungenye yolaka, noma ngabe inja inolaka (nokho) noma cha.
UKUTHENGA KAKHULU NJENGESITOLO
Izindaba ziningi zezinja ezikhathazayo uma umniniyo esegumbini, noma ephethe leash, nokho ziphenduke pussycats lapho umniniyo ushiya noma enikeza
leqa komunye umuntu. Okunye okungenzeka ukuthi inja ivikela umnikazi wayo. Okunye futhi okungenzeka ukuthi ubukhona bomnikazi buyesabisa
inja ukuzethemba okwanele ukwenza ngobudlova, kepha inja iyavala lapho umnikazi wayo ehamba. Kodwa-ke incazelo yesithathu futhi mhlawumbe engenzeka, ukuthi umniniyo
kugcizelelwa lapho kulindelwe ukuthi izinja ziziphathe ngokusondele kwezinye izinja, kanye neminye imicimbi ezayo - efana nokuncintisana kwendandatho.
Ingcindezi yomuntu yikugcizelela inja ekwazi kahle ukucindezelwa ngumnikazi wayo (bayakwazi ukufunda ulimi lomzimba womuntu,
khumbula?) futhi lokho kwanele ukumbeka embundwini wakhe wobudlova.
Ngokusemandleni akho, gcina i-leash yakho (nolimi lomzimba). Hlala uphefumula, futhi uvuselele inja yakho ngokuphefumula, futhi!
UKUHLANGANISANA OKUFANELE KWENZIWE NGEZOBUCHWEPHESHE NEZENZAKALO ZENZAKALELWE I-LEASH
Uma wake wenza iphutha lokujezisa inja yakho ngokuziphatha okungafanele kwezinye izinja on-leash, kungenzeka ukuthi umnikeze ukuzihlanganisa okungalungile
phakathi kokuvuza nokukhona kwezinye izinja. Ukulungiswa kwamazwi, ukujuluka kokuxebuka noma, okwethusayo, okuvela kukholamu yokushaqeka, konke kuyingcindezi yokuthi
inja yakho manje ingahle ihlanganyele nokuba khona kwenye inja lapho ixhumekile. Lokho kucindezelwa okwengeziwe kungambangela ukuba abe nolaka lapho ehlukile
kungenzeka ukuthi wayengekho.Mhlawumbe wahlaselwa enye inja ngenkathi esexuthweni. Ukuhlaselwa kungakha izinhlangano ezinamandla kakhulu; uvame
bona inja esebenza ngokuhlanya ibhekise kohlobo oluthile, uhlobo, noma umbala wenja omkhumbuza ngomhlaseli wangaphambilini.
UKUGCINWA KWESIVIVINYO NJENGESITOLO / ISIQINISO
Kwesinye isikhathi izingeniso zibonakala zihamba kahle kuze kube yilapho umnikazi oyedwa ephenduka ezohamba, bese ehudula eweni ukuze enze inja yakhe ihambisane naye. Kungazelelwe kuqubuke impi
ngaphandle kwesizathu esibonakalayo ngaphandle kokuqina okuxakile.
Ukube izinto bezivele zimdaka phakathi kwezinja, ukuqina kwe-leash kungasusa kalula isixuku. Kokunye - kuyacindezela.
Cabanga ukube ububandakanyeke engxoxweni nothile, futhi othile ubambe ingalo yakho - noma okubi kakhulu, ikhola yakho yehembe - futhi uzame ukukuhudula.
Kuyacasula, yebo? Yebo, ukucasula kufana nengcindezi - mhlawumbe ukucindezelwa okwanele ukuqeda ukuxoshwa.
Kokunye, funda izinja ezimbili zimi ekhaleni, kuze kube nokuxabana phakathi kwazo. Manje bonisisa ulimi lomzimba wenja lapho umnikazi wayo ehlehla
ukuvuza. I-Reflex Reflex (ngokwesayensi ebizwa nge- “thigmotaxis”) imenza ancike phambili, aqinise izicubu zakhe futhi ame kancane;
okulingisa ukuqina komzimba, mhlawumbe nokuhlukumezeka komzimba wenja. Uma ukucasulwa-ukucaphukisa akwanele ukubangela ulaka kuleyo nja, yakhe
Ulimi lomzimba oluhlaselayo kungenzeka lubangele impendulo enolaka kusuka kwenye inja. Ungathola isibonelo esihle sale nto kulokhu
Imbangela ngayinye yokuhlukumezeka kwe-leash inekhambi layo. Abanye badinga isenzo sokuvimbela - izinyathelo ezisebenzayo ezinciphisa amathuba esikhathi esizayo
ulaka. Abanye basabela kahle ekungeneleleni ngesikhathi sangempela sokuhlukumezeka okungaba khona. Konke kudinga ukuthi ugcine ikhanda elipholile lapho ukhomba
Ngikwenza umthetho omuhle impela wokungazingenisi izinja ngenkathi ngiphethe ukuxhapha. Inqubo yami yokwethula inja kuya inja ifaka ukuvumela izinja zibone ngamunye
okunye kusuka kude futhi, uma konke kuvela kuyindida njengoba izinja zisondele komunye nomunye, ukuphonsa ukuqhuma nokuvumela izinja ukuba zihlangane ngokujwayelekile, ngaphandle komuntu
ukuphazamiseka. Uma umhlangano uvumbulula, singabamba ukuqhuma futhi sihlukanise izinja ngaphandle kokufaka ingozi yokuhlangana okusondele namazinyo avutha amalangabi. Uma konke kuhamba
kahle, noma kunjalo, sisusa ukuqhuma ngemuva komzuzwana noma emibili yokubingelela, futhi sivumele izinja ukuthi zidlale ngokukhululeka.
Umthetho wami mayelana nokuthi “awubingelelwanga on-leash” usebenza kahle ukuvikela ukukhungatheka kokuzibamba. Ngoba izinja zami azikho esimweni sokubingelela njalo
ezinye izinja ziyaleak, azikuqali lokho kulindela, ngakho-ke musa ukukhungatheka lapho kungenzeki. Ngifundisa izinja zami ukuthi lapho
sebeshonile, banami, futhi umsebenzi wabo ip ukunginaka. Kuphela uma ngilahla loash bese ngibanikeza i- "Go play!" Cue do
lindela ukuhlangana nenja esondelayo.
Ngenxa yalesi sizathu, asifundisi ukuzivocavoca ngokubambisana emikhakheni yethu yokuziphatha okuhle (ukubingelela abantu, yebo; ukubingelela izinja, cha). Sihlose ukukholisa
izitshudeni zethu zenani lokubusa okungabingelelanga kusuka kuSuku Lokuqala lesigaba sabo sokuqala, ngokwengxenye yokwehlisa amandla okubekezela-okucasulayo.
(Uma umfundisi wakho wekilasi efuna ukuthi ubambe iqhaza kulomsebenzi wokubingelela inja nokuya inja, zizwe ukhululekile ukwenqaba ngenhlonipho.)
Lokhu kungahle kube okungaphezulu ngawe kunokuphathelene nenja yakho. Ngokuvamile ngaluleka amaklayenti ami ukuthi angashiyi izinja zawo ezandleni zabantu abangabazi - ngisho nodokotela bezilwane.
Ngaphandle kwakho lapho ukuvikela inja yakho, abanye bangase basebenzise ukusetshenziswa okungafanele kwamandla ukuphoqa inja yakho ukuthi ibambisane. Ukuvinjwa okubonakalayo kungenzeka
ukukhuphula ukucindezelwa yinja yakho nobudlova obumphumela. Udokotela wakho wezilwane angakwazi ukwenza lowo msebenzi wenziwe, kepha isenzo senja yakho singanda
bese eba mbi ngokuhlangana ngakunye okulandelayo.
Udinga indlela enezinyathelo ezimbili kulokhu kuziphatha - ukuguqula imigomo yenja yakho kanye nawe. Ukuzindla, i-yoga, i-biofeedback, nezinye izinqubo zokuzithoba
zilusizo ukuze uziqeqeshe futhi uzikhumbuze ukuthi uhlale uzolile ngesikhathi sokusebenzelana okungenza ukuthi inja yakho isabele ekucindezelekeni kwakho ngamandla.
“Ukuphefumula esikwele” kuyindlela eyodwa elula ongayisebenzisa ukuze uzithobe futhi wehlise nengcindezi yakho. Ungase futhi ufundise inja yakho ukuphefumula, bese
mcele ukuba aphefumulele ekukhulumeni - anciphise ukucindezelwa kwakhe - futhi akunikeze okuthile ongacabanga ukukwenza, nakho okunciphisa ukucindezela kwakho. (Bheka u- “Calm, Slow
Ukuphefumula, "ikhasi elihlukile.)
UKUHLANGANISANA NGOKUQALA KWEZOBUCHWEPHESHE NEZEZO ZE-LEASH
Lapho umthelela omkhulu wenhlangano engemihle edlule, kuyodingeka usebenze kanzima ukukunqoba.
Uma inja yakho ibonile ukuthi ukuba khona kwenye inja kubangela ubuhlungu noma ukungaphatheki kahle entanyeni yayo - kusuka ekushayweni kwekhola kagesi, ingcosana ye
i-prong collar, noma ngisho nokujaha i-collar flat - qala ngokushintsha imishini.
Ngemuva kwalokho sebenzise uhlelo lokunciphisa izinqumo nokuzinikela kwezinye izinja. Inja ekude yenza inkukhu yenzeke (enye inja idinga ukuthi ibe yanele ngokwanele
kude ("umbundu omncane") ukuze ungasebenzisi impendulo enokhahlo yenja yakho). Ambuke enye inja; umondle inkukhu. Ambuke futhi;
dlisa inkukhu. Bheka - okuphakelayo Bheka - okuphakelayo Ngokuphindaphindiwe, kuze kube yilapho ibona enye inja ingqondo yayo icabanga ukuthi “Inkukhu!” - futhi ayisabe isacindezela
ukuba khona kwenye inja.
Bese wehlisa ibanga kancane kancane phakathi kwenja yakho nenye inja, bese ukhulisa ukuqina ngalezi zindlela: izinja eziningi, ukunyakaza okwengeziwe
kusuka ezinjeni, ukubhekana ngeziqu zamehlo nezinye izinja, ukuhamba kwe-offset (ukuhamba ngendlela efanayo kepha hhayi eduze komunye nomunye); ukuhamba ngokufana
(eduze komunye nomunye, izinja kubantu abangaphandle ngaphakathi); izindlela ezisetshenziswayo, ekugcineni, izindlela eziqondile.
Uma inja yakho ihlaselwe enye inja kwesinye isikhathi noma ngaphezulu, ukuhlangana okungalungile kungaqina kakhulu, futhi nokuguqulwa kube ngaphezulu
yenselelo. Uma ukuba khona nje kwenye inja kuyinto ecindezelayo kakhulu yenja yakho, ungafuna usizo losizo lokuziphatha okuhle
wohlelo lwakho lokuguqulwa, nodokotela oziphatha kahle wezilwane, ngengxoxo yemithi yokuguqulwa kokuziphatha.
Ukuphefumula okwehlisa umoya ngezinja zakho ekhaya, futhi njengoba wena nenja yakho nithola ikhono, zijwayeze ezindaweni eziphazamisayo kancane kancane.
UKUSHINTSHA UKUQHAQHA NJENGES STRES
Isixazululo salokhu silula ngokungenangqondo: mane ufundise inja yakho ukuthi ukuqina kwelebhu ngokuthembekile kubikezela izinto ezinhle. Udinga inja yakho, i-leash,
nokunikezwa okukhulu kwento ayithandayo, asika izingcezu zosayizi we-pea. Manje donsela kancane ukuvuza kwakhe - bese umondla. Yenza lokhu izikhathi eziningi, kuze
i-tug on the leash ishukumisela inja yakho ukuba iguqukele kuwe ngenhlanhla ilindele inhlanhla. Bese ukhulisa ingcindezi ekuweni, kanye nesikhathi
ingcindezi. Okulandelayo, prakthiza umdlalo "we-leash pressure equals waphatha" phambi kweziphazamiso ezandayo, ekugcineni lapho kukhona abanye
Khomba bese ubhekisisa imbangela ethile yokuhlukumezeka kwenja yakho; phatha isimilo sakhe se-leash ukuvikela ukukhungatheka, ukuvuswa, ukucindezelwa, kanye
ukwesaba okuyizimbangela zokuziphatha kwakhe okungathandeki; mnikeze ukuzihlanganisa okusha ngokuba khona kwezinye izinja; futhi umshiye ephephile
ukusebenzisana kwezenhlalo (i-canine futhi womuntu), futhi uzokwazi kahle ukuphumelela.
UPat Miller, i-CBCC-KA, i-CPDT-KA, iCDBC, ungumhleli Wokuqeqesha weWDJ. Uhlala eF'airplay, eMaryland, indawo yesikhungo sakhe sokuqeqesha i-Peaceable Paws, lapho enikeza khona amakilasi okuqeqesha izinja kanye nezifundo zabaqeqeshi. UPat futhi ungumlobi wezincwadi eziningi zokuqeqeshwa okuhle, kufaka phakathi entsha yakhe, ethi Do
Izinja Ezingaphezu Kokuphilayo: Nikeza Inja Yakho Ithuba Lesibili Empilweni Yokuqala. Bona ikhasi 24 ukuthola eminye imininingwane.